Izay mafy no mandroso… | NewsMada
Amin’izao ankatoky ny fiafaran’ny ady mivantana amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19 izao, mila irosoana sy andehanana mafimafy kokoa no ho ny teo aloha ny raharaham-pirenena eo amin’ny fampandrosoana; eny, na tena zava-dehibe sy maika aza ny fahamehana ara-pahasalamana teo.
Amin’izao, zava-dehibe maika atao ho vaindohan-draharaha koa ny fanarenana ny fiainam-bahoaka sy ny firenena, ny fanonerana ny fahavoazana isan-tsehatra sy isan’ambaratonga noho ny fihibohana tsy nahazoana nihetsika firy; eny, hatramin’ny fanorenana ny firenena aza: mila ainga vaovao.
Aina sy hery vaovao amin’izay atao izany. Toy ny hoe vao nivoaka ny hopitaly fitsaboana: manatanja-tena mba handehanana sy hahavitana asa bebe kokoa no ho teo aloha, mitandrin-tena mba tsy hiverenan’ny fahavoazana na aretina… Fanapahan-kevitra amin’ny fijoroana sy firosoana izany.
Koa tsy maintsy mihetsika ny tena, sahy, mijoro, mandroso… Aina sy hery voalohany amin’izany ny faharesen-dahatra sy fanapahan-kevitra amin’izay aleha sy atao: ho aiza, haninona na hanao inona? Tsy ekena ary tsy hankaiza izay mbola mitsapatsapa fa mila finoana ny raharaha.
Miara-dalana amin’izany ny firaisankina sy fitoviam-pijery amin’ny tanjona mazava hoe: hampandroso ny firenena, hanatsara ny fiainam-bahoaka. Na ireo hoe mpanohitra aza: mampandroso ny firenena sy manatsara ny fiainam-bahoaka ve izay lazaina sy atao; eny, tsy mitovy aza ny hevitra?
Ny tsy fitovian-kevitra aza no tokony hampandeha haingana kokoa ny raharaham-pirenena sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka amin’ny hoe fampandrosoana. Izay ve ny zava-misy sy izay iainana amin’izao amin’izay lazaina sy ataon’ny mpanohitra? Mila matanjaka raha tiana henoina sy inoana.
Sarotsarotra sy mafimafy ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka taorian’ny hamehana ara-pahasalamana? “Rehefa mafy ny mandroso, dia ireo mafy no mandroso”, hoy ny filohan’i Etazonia teo aloha, i John F. Kennedy. Izay mafy no mandroso, tsy miandry ny tsy afaka na malemy tsy te handeha.